प्रधानमन्त्री अोलिले पिउने पानीको मूल्य प्रती बाेतल १५ हजार पर्छ भने एक दिनमा चार बाेतल पानी पिउछन्
प्रकासित मिति : २७ असार २०७५, बुधबार प्रकासित समय : १३:१६
काठमाडौँ असार २७। प्रधानमन्त्री केपि ओलिले पिउने पानी प्रतिबोतल रु. १५ हजार तिर्ने गरेको खुलासा भएको छ । जापानमा बनेको पानी जसले किडनी सफा गर्न मदत गर्ने भएकाले उनले उक्त पानी पिउने कुरा एक पत्रिकाले छापेपछी सामाजिक संजालमा व्यापक चर्चाको बिषय बनेको छ । जापानमा बनेको पानी जसले किडनी सफा गर्न मदत गर्ने भएकाले उनले उक्त पानी पिउने कुरा खुलेको हो ।
पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनको ४ बोतल पिउने गर्छन र दिनको ६० हजारको दरले मासिक १८ लाखगरि बर्षभरी पानी पिउने खर्च २ करोड १६ लाख खर्च हुने तथ्यांक निकालेको छ । उक्त पानी राज्यकोषबाट पिउने गरेको दाबि समेत गरेको छ ।
देश गरिब छ तर मन्त्रीहरु सारै धनी भइसके, यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको छ । यति सम्म कि एक बोतल पानीको १५ हजार तिरेर पानी पिउन सक्ने गरिब देसका प्रधानमन्त्रीको देशमा लाखौ युवाहरु बेरोजगार छन् ।
सोच्नै पर्ने कुरा के छ भने, एक बोतल पानीको १५ हजार राज्यको ढुकुटीबाट तिर्दा ४ जना युवाहरुको एक महिनाको तलव एकैदिन स्वाहा हुन्छ, अनि सरकार टाट नपल्टेर के हुन्छ ?
युवाहरु बेरोजगार नभएर के हुन्छन ? वार्षिक २ करोड १६ लाखको पानी मात्र पिउने प्रधानमन्त्री गत २०७४ साल फाल्गुन ३ गते देखि प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । त्यस अर्थमा अहिले सम्म ९० लाखको पानी पिइसकेका रहेछन ।
जनताको पेट खान नपाएर भोकै हुँदा पेट दुख्छ, तर नेताको धेरै खाएर पेट दुख्छ। अब आफै भन्नुस यो देश यिनै प्रधानमन्त्रीले बनाउलान ? अनि होला त देशको बिकास ?
बार्सिक २ करोड १६ लाखको पानी मात्र पिउने प्रधानमन्त्रीको सानोतिनो स्वास्थ उपचार पनि बिदेशमा हुने गरेको छ। झन्डै १२ वर्षदेखी प्रधानमन्त्री केपि ओलिले किडनिको उपचार गर्दै आएको समाचार स्रोतले बताएको छ।